Asa 22 - Ny Baiboly
Asa toko 22
Ny nandaharany teny tamin'ny Jody nilaza ny nibebahany, sy ny nanirahan'ny Tompo azy ho any amin'ny jentily - Ny nisafoahan'ny Jody taminy.
1Ry rahalahy sy hianareo ray, henoy ny teny alahatro aminareo ankehitriny, mba hanala tsiny ny tenako. 2Vao ren'ny olona fa teny hebrio no nitenenany taminy, dia vao mainka nangina izy. 3Ary hoy izy: Izaho dia lehilahy Jody teraka tany Tarsy any Silisia, fa teto amin'ity tanàna ity no nahabe ahy, teo ambanin'ny saokan'i Gamaliely, nampianarina tsara ny Lalàn'ny razantsika aho, ary nazoto erý ho an'Andriamanitra tahaka anareo rehetra izao. 4Nanenjika sy namono izay nanaraka izany fampianarana izany aza aho, ary namatotra azy na lahy na vavy, sy nampandatsaka azy an-tranomaizina. 5Ny lehiben'ny mpisorona sy ny loholona rehetra no vavolombeloko; fa nandray taratasy tamin'izy ireo ho an'ny rahalahy aho, dia nankany Damasa hamatotra sy hitondra izay hita tao ho atý Jerosalema mba hampijalina.
6Kanjo nony nandeha aho ka mby teo akaikin'i Damasa, tamin'ilay mitatao vovonana iny ny andro, dia nisy fahazavana lehibe tonga tampoka avy any an-danitra nanodidina ahy. 7Lavo tamin'ny tany terý aho, sady nandre feo nanao tamiko hoe: Saoly, Saoly, nahoana no manenjika ahy hianao? 8Dia namaly aho nanao hoe: Iza moa hianao, Tompoko? Ary hoy izy tamiko: izaho no Jesoa avy any Nazareta izay enjehinao. 9Ry zareo niaraka tamiko izany, nahita ny fahazavana ihany, fa tsy nandre ny feon'izay niteny tamiko. 10Ary hoy izaho: Inona no hataoko, Tompoko? Ka hoy ny Tompo tamiko: Mitsangàna, ary mankanesa any Damasa, fa any no holazaina aminao ny zavatra rehetra tsy maintsy hataonao. 11Tsy nahita anefa aho azon'ny famirapiratan'izany fahazavana izany, ka notantanan'izay niaraka tamiko aho, vao tonga tany Damasa.
12Ary nisy lehilahy anankiray atao hoe Anania izay nanaraka ny Lalàna, sy tsara laza tamin'ny Jody rehetra nonina tao. 13Tonga nanatona ahy izy ary nitsangana teo anilako nanao hoe: Ry Saoly rahalahy, mahirata. Niaraka tamin'izay, dia nahita azy aho. 14Ary hoy izy: Ny Andriamanitry ny razantsika efa nanendry anao hahafantatra ny sitra-pony, sy hahita ilay Marina, ary hihaino ny teny aloaky ny vavany. 15Fa hianao no ho vavolombelony hanambara amin'ny olona rehetra izay efa hitanao sy renao. 16Ary ankehitriny, inona no andrasana? Mitsangàna, raiso ny batemy, ary mialà amin'ny fahotana, amin'ny fiantsoana ny anaran'i Jesoa. 17Nony niverina tatý Jerosalema aho ka nivavaka tao an-tempoly, dia azon-tsindrimandry, 18ary nahita an'i Jesoa nilaza tamiko hoe: Haingàna hianao, mialà faingana eto Jerosalema, fa tsy handray ny fanambaranao ahy izy ireo. 19Ary hoy izaho: Tompoko, fantatr'izy ireo fa izaho no nandatsaka an-tranomaizina izay nino anao, sy nikapoka azy tao amin'ny sinagoga; 20ary fony izy nandatsaka ny ran'i Etiena martirinao, dia tenako no nanatrika sy nankatò an'izany, ary niambina ny lamban'izay namono azy. 21Fa hoy izy tamiko: Mandehana, fa any an-tany lavitra amin'ny jentily no anirahako anao.
22Nihaino azy ihany izy ireo hatramin'izany teny izany, fa nony mby tamin'io, niantso izy nanao hoe: Esory amin'ny tany ilay io, fa olona tsy famelona intsony. 23Mbola nihorakoraka sy nanipy lamba, ary nitora-bovoka eo izy ireo, 24dia nasain'ny komandy hoentina any anaty rova sy hadinina amin'ny kapoka i Paoly, mba hahalanany izay anton'ny nanakoran'ny olona azy toy izany.
25Ary efa voafatotra tamin'ny anja-koditra sahady i Paoly vao nilaza tamin'ny kapiteny izay nanatrika teo hoe: Moa mahazo mikapoka lehilahy Romana mbola tsy voaheloka akory va hianareo? 26Nony nandre izany ny kapiteny, dia lasa nankany amin'ny komandy, nilaza hoe: Inona ity hataonao? fa Romana io lehilahy io. 27Dia nanatona an'i Paoly ny komandy, ka nanao taminy hoe: Etsy ange, moa Romana va hianao? Ary hoy izy: Eny. 28Dia hoy indray ny komandy: Vola be no nahazahoako izany voninahitra izany. Fa hoy Paoly? Ny nahaterahako kosa no nahazahoaka an'izany. 29Niaraka tamin'izay, dia nihataka ry zareo nivono-kampijaly azy; ary natahotra mbamin'ny komandy aza nony nahalala fa Romana i Paoly, noho ity izy efa nampamatotra azy. 30Nony ampitso, te-hahalala marina izay antony niampangan'ny Jody azy izy, ka nasainy hovahana i Paoly, ary nodidiany hivory ny mpisorona sy ny Sanedrina, dia nentina i Paoly ka napetrany teo afovoan'izy ireo. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0267 seconds